चुम्बनले सिनेमा चल्छ ? ~ The Nepal Romania
मेरोसिनेमा काठमाडौं १४ माघ,
चैतमा एउटा सिनेमा आउदैछ निगरानी । निगरानीका निर्देशक राजेन्द्र उप्रेती हुन् । राजेन्द्र उप्रेती सिलसिलाका निर्देशक पनि हुन् । सिलसिला हिरो र हिरोइनबीचको चुम्बनले गर्दा पनि चलेको हो ।
राजेन्द्र उप्रेतीलाई पनि त्यस्तै लागेको होला । त्यसैले त निगरानीमा पनि हिरो र हिरोइनबीच मिठो चुम्बन गराएका छन् । त्यो चुम्बनको फोटोलाई पोष्टरहरुमा ठुलो बनाएर राखेका छन् । पत्रपत्रिकामा पनि चुम्बनकै फोटोहरु बाडेका छन् ।
बिडम्बना हिरो हिरोइनले चुम्बन गरेकै कारण सिलसिलापछि आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ पनि सुपरडुपर हिट भयो । यहा प्रश्न उठ्छ कि के चुम्बनकै कारण सिलसिला र आफ्नो माँन्छे आफ्नै हुन्छ सुपरडुपर हिट भएका हुन् त ? चुम्बनलाई बढि हाइलाइट गरेकै भएर दर्शक ती सिनेमा हेर्न ओइरिएका थिए त - यदि त्यसो हो भने निगरानी अबको सुपरडुपर हिट सिनेमा हो भनेर भविष्यवाणी गर्दिए भैगो । केही गरी निगरानी हिट भयो भने त्यसको श्रेय चुम्बनले नै लानसक्छ । अनि त्यसपछि लगातार हरेक सिनेमामा चुम्बन राख्न निर्माता निर्देशक बाध्य हुनेछन् र नेपाली सिनेमाले हलिउडका सिनेमाको एउटा राम्रो नक्कल गर्नेछ । हलिउडका प्रायः सिनेमामा हिरो र हिरोइन चुम्बन गर्छन् । त्यसपछि नेपाली सिनेमामा पनि त्यस्तो दृश्य सामान्य हुन्छ । त्यसैले राजेन्द्र उप्रेतीलाई अग्रिम बधाई, नेपाली सिनेमामा एउटा नौलो ट्रेण्डको शुरुवात गरिदिएकामा ।